Maamul Goboleedka Reer Somaliya Ee Puntland Oo Sharaxaad Dheeri Ah Ka Bixiyay Khasaaraha Dagaalo Dhexmaray Kooxda Al-Shabaab | Duul News International
Maamul Goboleedka Reer Somaliya Ee Puntland Oo Sharaxaad Dheeri Ah Ka Bixiyay Khasaaraha Dagaalo Dhexmaray Kooxda Al-Shabaab	(Duulnews)-Wasiir u hadlay Maamulka Puntland,ayaa sheegay in dagaal culus oo Ciidamadoodu la galeen Kooxda Al-shabaab ee Dhulka Buuraha ah ku sugan uu ka dhashay Khasaare nafeed oo labada dhinac ah iyo dhaawac tiro badan.
Wasiirka Amniga Puntland, Xasan Cismaan Aloore, ayaa Saxaafadda u sheegay in Dagaal Shalay labada dhinac dhexmaray ay kala gaadheen khasaare Dhimasho “13-kii February 2015-ka Geesiyada Ciidanka Puntland iyo Budhcad Diimeedka Al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya Silsilada Buuraha Golis, ayaa dagaal dhexmaray. Muddo ka hor Ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay Buuraha Galgala iyo degaannada ku dhaw, waxay khasaare laxaad leh u gaysteen Argagixisada Al-shabaab. Dagaalkaasi Khasaaraha loogu gaystay Al-shabaab waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa Degaanada Dhagax-Dabuur iyo Madashoor. Wasaaradda Amniga Puntland iyo Ciidanku waxay xaqiijinayaan in Al-shabaab loo gaystay Khasaare dhan 16 Dhimasho ah iyo 26 Dhaawac ah inta la hubo. Ciidanka Puntland waxaa soo gaadhay khasaare kooban oo ah Laba Mujaahid oo dagaalka ku shihiiday iyo 6 dhaawac ah” ayuu yidhi Wasiirka Amniga puntland.
Ilaa hadda Ma jiro Wax war ah oo ku saabsan Dagaalka Puntland iyo Al-shabaab oo ka soo baxay dhinaca Al-shabaab, balse Wararka Madaxa banaan ayaa sheegaya in Caasimada Puntland la soo gaadhsiiyay dhdimashada iyo Dhaawaca Ciidanka puntland
Wasiirku waxa uu sheegay in dagaalku ka dhashay Dad degaanka ah oo Al-shabaab Afduubatay kadibna qaarkood dishay. Maamulka puntland ayaa mudooyinkii u dambeeyay waxaa soo wajahay amni darro kaga imanaysa Kooxda Al-shabaab oo dhawaan dhawr weerar oo isxigay ka fulisay Gudaha Bosaaso.